Kitra – «Can 2019»: nomontsanin’i Soudan teo amin’ny kianjany ny Barea de Madagascar | NewsMada
Tsy nampoizin’ny Barea de Madagascar ny fahareseny teo anatrehan’i Soudan, nandritra ny lalao miverina, hiadiana ny ho tompondakan’i Afrika «Can 2019», taranja baolina kitra. Afa-bela ry zareo Sodaney.
Afa-baraka tanteraka ny Barea de Madagascar. Resin’i Soudan, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 1, ny ekipam-pirenena malagasy, nandritra ny lalao miverina, notanterahina tetsy amin’ny kianja Complexe sportif Vontovorona, omaly. Fihaonana, tafiditra amin’ny andro fahadimy, eo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona.
Tsy nisy nanam-po ity vokatra ity satria noheverina fa tsy hahasakana ny Barea de Madagascar mihitsy ry zareo Sodaney, raha ny herijika sy ny laharana misy azy ireo. Tsy izany anefa no nitranga fa lavo teo an-kianja filalaovany ny ekipam-pirenena malagasy. Nanjakan’ny Barea, tanteraka anefa ny fihaonana, nandritra ny 90 mn nilalaovana. Betsaka ireo baolina tokony ho tafiditry ny Malagasy, saingy tsy tao ny vintana. Nifanitsy tamin’ny mpiandry tsatoby an-dry zareo Sodaney ny dakan-dry Njiva sy ry Paulin ary i Bolida.
Nanokatra ny isa ry zareo Sodaney, tamin’ny alalan’i Mohamed Moussa, teo amn’ny minitra faharoa. Niezaka nanindry ny Malagasy avy eo, saingy tsy nety nahakobana ny masonaraton’i Soudan mihitsy.
Io isa tokana, 1 no ho 0 io, no nentin’ny roa tonta niala sasatra. Mbola nanohy nanafika hatrany ny Barea, teo amin’ny fidirana faharoa, saingy tsy nety nahasahala ny isa. Nanampy isa indray ry zareo Sodaney, teo amin’ny minitra faha-61, taorian’ny valim-panafihana tsara. Voatery nanolo mpilalao i Nicolas Dupuis, avy eo ka nanala an’i Njiva ary nampiditra an’i Carolus. Nahitam-bokany izany ka nahafaty baolina ny Malagasy, tamin’ny alalan’i Carolus, teo amin’ny minitra faha-76. Tsy nitohy anefa izany fa ry zareo Sodaney, indray no mbola namono ny baolina fahatelo, teo amin’ny minitra faha-85. Mijanona ho isa 10 izany ny Barea. Voalohany hatrany ny Senegal, nanilika an’i Ginea Ekoatorialy, tamin’ny isa, 1 no ho 0.
Nicolas Dupuis (mpanazatra Barea) : Tsy nampoizinay mihitsy iny vokatra iny. Variana loatra nanodinkodina sy nanao fampisehoana fahaizana fotsiny ny mpilalaon’ny Barea de Madagascar, ka nanadino ny tena zava-dehibe dia ny famonoam-baolina. Tonga aloha loatra koa ilay baolina voalohany tafiditry ry zareo Sodaney ka somary nampikorapaka ny mpilalao malagasy. Na izany aza, nahay ilay mpiandry tsatoby an-dry zareo Sodaney. Ho jerenay miaraka ny fomba famonoana baolina izay mbola tena lesoka be eo amin’ny Barea de Madagascar.
Morel (mpilalao Barea) : Mahay baolina ny Malagasy, tsy tao amin’ny Barea de Madagascar ilay vintana nomoana baolina. Tao aminay mpilalao rehetra anefa ilay finiavana handresy, saingy iny ny vokatra.
Moussa (mpilalao Soudan) : Faly tokoa izahay fa nahafaka vela, ary nahazo isa 3, taty amin’ny tanin’ny Barea de Madagascar. Izaho no nahafaty ny baolina voalohany, nanome hery ny namako rehetra teny ambony kianja. Efa nohadihadianay tsara ny fomba filalaon’ny Barea, taorian’ny lalao mandroso ka nahitam-bokany izany. Na izany aza, mahay ny Malagasy ary mirary soa ho azy ireo, hahavita be any amin’ny “Can 2019”.